Vuelio: Qalabkaaga Xiriirka Warbaahinta iyo Saameynta | Martech Zone
Xiriirka dadweynaha si weyn ayuu isku beddelay markii la qarxiyay xarumaha warbaahinta xilligii dijitaalka. Mar dambe kuma filna inaad xoogaa meela yar ka dhigto oo aad billowdo liistada billaha ah ee lagu xusay magacaaga. Maanta, xirfadlaha xiriirka bulshada ee casriga ahi waa inuu maareeyaa liistada sii kordheysa ee saamaynta iyo daabacaadaha, ka dibna caddeeyo saameynta ay ku leeyihiin sumad.
Barnaamijka softiweerka ah ee loo yaqaan 'PR software' wuxuu ka soo unkamay qaybinta war-saxaafadeed fudud ee nidaamyada maaraynta xiriirka casriga ah ee ka caawin kara cilmi-baarista xirfadaha xiriirka bulshada, helitaanka, is-gaadhsiinta, otomatiga, iyo cabirka saamaynta ay ku leeyihiin iyaga oo ka wakiil ah macaamiishooda.
Vuelio waa barnaamuj barnaamij PR ah oo ka kooban dhammaan dhinacyadaas xiriirka bulshada casriga ah. Fahmaan cidda muhiimka ah, sida ugu wanaagsan ee loola dhaqmayo ka dib u dir mawduuc, kormeer natiijooyinka, cabir saameynta warbaahinta bulshada, iyo falanqaynta waxtarka, dhammaantood hal meel.
Noocyada Vuelio Ku dar
Macluumaadka Warbaahinta - Taabo liiska warbaahinta ugu awoodda badan warshadaha PR. Adoo marin toos ah u leh in kabadan hal milyan oo saxafiyiin ah iyo saameyn kuyeelashooda kudhowaad 200 oo wadan, waxaad kulaxiriiri kartaa dadka ugu muhiimsan sheekadaada, mowduucaaga, ama ururkaaga.
Kormeerka Warbaahinta - Faham sida sheekadaada ay u heleen weriyeyaasha iyo dadka wax ku oolka ah oo leh agab dhegeysi iyo qiimeyn xariif ah. Kormeerku wuxuu kuu ogolaanayaa inaad kula socoto wararka jaban iyo wararka ku saabsan baahinta, daabacaadda, khadka tooska ah iyo warbaahinta bulshada.
Qaybinta War-baahinta - Si fudud u hel war-saxaafadeedyadaada dadka muhiimka ah. Si toos ah ugu soo dir sheekooyinka warbaahinta badan siligga, bulshada, makiinadaha raadinta, ama boggaaga. Kadib raad raac, falanqee, oo wax ka barto natiijooyinkaaga waqtiga-dhabta ah.
Falanqaynta Warbaahinta - Falanqee sida sheekadaada loo helay oo aad u hesho aragti wax ku ool ah si isgaarsiinta mustaqbalka ay u sii fiicnaato. Eeg farriimaha, waxyaabaha, iyo kanaalada ay la shaqeynayaan (iyo kuwa aan shaqeynin) ee lala yeelanayo saxafiyiintaada muhiimka ah iyo saamayntaada. Ku kasbo aragti ku saabsan sida ugu wax ku oolsan ee loo gaarsiiyo dhagaystayaashaada, kor loogu qaado ROI, loona hagaajiyo sumcadda sumcadda.
Qolka wararka ee internetka - U diyaarso waxyaabaha aad si fudud ugu heli karto saxafiyiinta, daneeyayaasha, iyo saamaynta ku leh xarun warbaahineed oo khadka tooska ah laga isticmaali karo. Si fudud u daabac war-saxaafadeedyo, sawirro, iyo macluumaad taageeraya intaad ka helayso xogta aad u baahan tahay si aad u hagaajiso wax-ku-oolnimada wax kasta oo aad abuurto.
mataleysay - Abuur muuqaal muuqaal qurux badan u leh daneeyayaashaada sida sheekadaada loogu soo warramay ilbiriqsiyo gudahood. Daboolista wararka saxda ah, dhaqdhaqaaqa bulshada, fiidiyowga, iyo fiidiyowyada maqalka ah si loo abuuro bandhig olole cajiib ah ilbiriqsiyo gudahood.
Maamulka FOI - Si fudud u maaree dhammaan nidaamkaaga Xorriyadda Macluumaadka. La soco waqtiyada kama dambaysta ah, tirakoobka hawsha, isla markaana si dhakhso leh u soo saar warbixinno ku saabsan tirada iyo nooca codsiyada, sida uu qabo sharciga FOI 2000.
Maaraynta Xatooyada - Maaree isku xirnaanta muhiimka ah ee xarunta fududaynta maaraynta xiriirka. Ka dhig isgaarsiinta mid waafaqsan weriyeyaasha iyo saamaynta kooxdaada oo dhan adoo yeelanaya hal xarun dhexe oo internetka ah oo faahfaahinaysa is-dhexgal kasta oo dhexmara kooxdaada iyo daneeyayaasha muhiimka ah
Maareynta Xiriirka Warbaahinta - Ku sii daa dhamaan istiraatiijiyaddaada isgaarsiineed xarunta ololeynta ee dhexe. Barnaamijka maamulka warbaahinta ee Vuelia ayaa kaa ilaalinaya waqtiga adoo ka dhigaya mid fudud in la abaabulo, la wadaago, lagana warbixiyo wax kasta oo kooxdaadu qabato, iyada oo si toos ah loola socdo, isdhexgalka emaylka, iyo qalabka warbixinta iyo falanqaynta sare.
Kala xiriir Vuelio Qiimaha iyo Macluumaadka
Tags: xorriyadda macluumaadkakeydka warbaahintakormeerka warbaahintamaaraynta xiriirka warbaahintaqaybinta wararkabaahinta warkaqolka wararka ee internetkabarxadda garoonkamadal prqaybinta warsaxaafadeedbarnaamijka xiriirka bulshadamaareynta saamileydavuelio